Mamaky ny boky mahasoa izay mahamendrika ny saina
"Sambatra izay mamaky sy ny mihaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny ; fa antomotra ny andro."— Apôk. 1:3.
Nampiharinay tao an-tokantrano ny famakiana boky mahasoa sy mahaliana miaraka amin'ny Baiholy, ka dia faly mandrakariva ny zanakay tamin'ny nanolokoloanay azy toy izany. Tamin'izany fomba izany no nisakananay ny faniriana mafy tao aminy hivoaka miaraka amin'ireo tanora namany, ary koa nanolokoloanay tao aminy ny fitiavana mamaky boky mahasoa (,..) Tokony hananan'ny tokantrano tsirairay avy ireo bokin'ny "Fanahin'ny Faminaniana", ary tokony hovakina amin'ny feo avo izany (...) Ireo boky "Temoignages" (fijoroana ho vavolombelona) dia nisy torolalana tandrify ny rehetra, na ny ray aman-dreny izany na ny zanaka. Raha tsy maintsy hovakina mafy ho an'ny rehetra ao an-tokantrano izany, dia samy hahazo tombontsoa avy amin'ny toroheviny sy ny fampitandremany ary ny fananarany avokoa na ny zanaka na ny ray aman-dreny (...) Aoka hanokanana fotoana betsaka ny famakiana ny Soratra Masina sy ireo boky hafa mahaliana, izay hizara fahalalana sy hamerimberina ao an-tsaina ny fitsipika mahasoa. Aoka izay mahay mamaky teny indrindra no hofidina hamaky amin'ny feo avo, ka ny sisa kosa hisahana raharaha hafa mahasoa. Sady hahafinaritra no hahazoan-tsoa amin'izay fotoana izay ireo takariva rehetra iarahana ao an-tokantrano. — RH, 26 Desambra 1882,
llain'ny ankizy ny mamaky ny boky mahasoa azy; hamalifaly sy hampiala voly azy ireo izany ka tsy hahaketraka ny sainy na koa handreraka ny vatany. — RH, 11 Desambra 1879.
Tsy maintsy hanana olana eo amin'ny boky tokony hovakiny ny ankamaroan'ny ankizy sy ny tanora. Raha tsy safidina mialoha ho azy ireo izany, dia izy ihany no hifidy izay tiany. Mety ho hitany eny rehetra eny ny boky manimba kanefa vetivety dia ho tiany izany. Raha omena azy kosa ny boky madio sy mahasoa dia hanjary ho voakolokolo ao aminy ny fitiavana mamaky izany. — RH, 11 Desambra 1879.
Rehefa ny zavatra tokony ho izy no atao, dia ho teraka ho azy ao am-po ny fahatsapana rikoriko manoloana ny zavatra ambany sy maivamaivana ary mikorontana. — YE, 18 Janoary 1894.
Ho tahaka ny fiasan'ny sankafo mahasalama eo amin'ny vatana ny vakiteny mahasoa eo amin'ny saina . Hatanjaka kokoa ianao eo amin'ny fanoherana ny fakam-panahy sy eo amin'ny fananana fahazarana tsara ary ny fanarahana fitsipika mahasoa, — RH, 26 Desambra 1882.